अमेरिकामा डेटोक्सिक [-50%] - उत्तम परजीवी क्लीन्स 2019!
डेटोक्सिक: परजीवी सफा घर उपचार
डेटोक्सिक एक नरम-अभिनय, पूर्ण हेल्पिंग हो तपाईंको हेल्मिन्थ र परजीवीहरू सफा गर्न, आन्तरिक अनुप्रयोगको लागि लक्षित। परजीवीहरूबाट छुटकारा पर्याप्त छैन - तपाईंले आफ्नो अ organs्ग र आंतहरू पनि राम्ररी सफा गर्नुपर्छ। उत्पादन सामग्री वनस्पति हुन्, त्यसैले यसको कार्य कोमल तर लामो छ। डेटोक्सिक क्याप्सुलमा बेचिन्छ वा डाक्टरको प्रिस्क्रिपन बिना ड्रपहरू। तयारीको नियन्त्रण खपत र निवारक एन्टी-हेल्मिन्थ उपचार विकल्पहरू हुन्। प्याकेजमा संलग्न प्रयोगको लागि निर्देशनहरू।
डेटोक्सिक कहाँ किन्ने?
तपाईको शरीरलाई परजीवीहरू, अण्डाहरू, तिनीहरूको फोहोर, र विषाक्त पदार्थहरू सफा गर्न; फेरि ऊर्जा र आराम प्राप्त; तपाईको मुटु, कलेजो, पेट, फोक्सो र छालालाई कीराबाट जोगाउनुहोस्, केवल विशेष एन्टी-हेल्मिन्थ उपचार डेटोक्सिक किन्नुहोस्।
गँड्यौलाहरू विरुद्धको तयारीलाई आधिकारिक निर्माताले स्वतन्त्र रूपमा सक्रिय रूपमा लागू गरेको छ। फार्मेसीमा हालै उपलब्ध छैन - तर ग्राहकहरूले प्रिन्टक्शन वा प्रीपेमेन्ट बिना डिटोक्सिक प्राप्त गर्न सक्दछन्।
तपाइँ भित्र अनावश्यक सूक्ष्मजीवहरु एक जोखिम पैदा गर्दछ - परजीवीहरु धेरै छिटो गुणा र चाँडै आफ्नो नयाँ होस्टहरु लाई acclimatize। परजीवीहरू (टिक, वर्म्स, लीचहरू, आदि) वातावरणमा हामीतर्फ आफ्नो बाटो बनाउँदछ:
मैदान। यदि तपाईं अस्वास्थ्यकर हुनुहुन्छ र आफ्नो हात धुनुहुन्न भने, किराको अण्डा भएको माटोका टुक्राहरू तपाईंको आन्द्रामा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं खान सक्नुहुन्छ।
पाल्तु जनावर र। यदि तपाईं आफ्नो घरपालुवा जनावरहरूको ख्याल राख्नुहुन्न भने, तपाईं तुरुन्तै अर्को अर्को पाउनुहुनेछ - एउटा सानो, रगत चुहाउने, सायद जech्ग पनि।
पैसा। धेरै हातहरूमा जान्छ, जुन परजीवीहरू बोकेको हुन सक्छ र तिनीहरूको अण्डाहरू तपाईंको छालामा रहन सक्छ। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू पहिले नै तपाईंको पाचन पथ र आन्द्रामा उनीहरूको मार्ग बनाइसके पछि विकसित हुन्छन्।
हेल्मिन्थले तपाईंको पाचन पथमा प्रवेश गरेको परिणाममा निश्चित लक्षणहरू समावेश छन् जसले रंगीलाग्दो रूपमा आफैलाई देखाउँदछ, रोग त्यहाँ लामो छ:
एलर्जी (रेशेस, टियरनेस, भरिपूर्ण नाक);
मलको साथ समस्या (पखाला वा कब्ज);
आँखा मुनि चोटहरू;
जोड़ र मांसपेशी दुख्ने।
सबै किनभने जुसले तपाईंको अ .्गको सट्टामा परजीवीहरूलाई खुवाउँदछ जुन आन्तरिक सर्तहरूको परवाह बिना नै चाँडै बहु गर्दछ।
तपाईंले यो थाँहा पाउनु अघि तपाईंको अ and्ग र आन्द्रामा परजीवी हुन्छन्: खाने, गुणा गर्ने र फोहोर थप्ने। स्लाग विषाक्तता हो, आफूलाई मतली, एलर्जी, र अन्य दीर्घकालीन रोगहरूमा अभिव्यक्त गर्दछ। यस कारणका लागि, हेलमिन्थहरू खतरनाक छ। तपाइँको लागि सहि तरीकाले उपयुक्त एन्टि-परजीवी तयारी खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, नरम अभिनय वनस्पति-मूल उपचार डेटोक्सिक। यसले शरीरमा काम गर्दछ:
यसले तपाईंको शरीरमा बस्ने जीवहरूलाई पक्षाघात गर्दछ;
यसले तिनीहरूका अंगहरू र आन्द्राबाट उनीहरू र तिनीहरूका अन्डा निकाल्दछ;
यसले विषाक्त पदार्थहरू जम्मा गर्दछ।
प्रयोग पछि डिटोक्सिक, तपाईं ऊर्जा र विश्राम को एक भीड महसुस हुनेछ। तयारी लिनु एकदम सजिलो छ: पानीले निल्छ र घर खपतका लागि उपयुक्त हुन्छ।
बच्चाहरूले प्राय: पेट दुखाइको गुनासो गर्दछन् - हुनसक्छ हेल्मिन्थले गर्दा भएको रोगमा। बाल रोग विशेषज्ञलाई देखेपछि डिटोक्सिक प्रयोग गर्नुहोस्। र तपाईंको बच्चाले पनि स्वादको आनन्द लिनेछ।
डेटोक्सिक कुकुर प्रेमीहरूको लागि पनि सिफारिस गरिएको छ - यो रोकथामको लागि पनि उपयुक्त छ र यसको साइड इफेक्ट पनि छैन।
डिटोक्सिक सामग्री र सुविधाहरू
हामीले परजीवीहरूबाट छुटकारा पाउनु आवश्यक छ - त्यो तथ्य हो! तर कसरी? तिनीहरू हेल्मिन्थसँग लड्न पाउडर, ट्याब्लेट, र एनिमा लेख्छन्। वनस्पति कम्पोनेन्ट्स कोमल र प्रभावकारी मानिन्छ: अर्क, इन्फ्यूजन, तेल, र पूरै बीज।
के ले डिटोक्सिकलाई राम्रो बनाउँदछ:
जgar्गगार फेरु: सुगन्धित र टाँसिएको गम राल समावेश गर्दछ, र बोट खाना पकाउन र चिकित्सा नुस्खामा प्रयोग गरीन्छ। डिटोक्सिक फेरुले परजीवीहरूलाई पक्षाघात पार्दछ, बिस्तारै आन्द्राबाट हटाउँछ।
सुमक फल (जुस)। एसिया एशियामा खाना पकाउनको लागि मसलाको रूपमा प्रयोग हुने पूर्वीय जडिबुटी पनि। डिटोक्सिकले सुमाक फलको रस समावेश गर्दछ जसमा क्लिजी र टानिक पदार्थ हुन्छन् जसले हेलमिन्थलाई पक्षाघात गर्दछ।
पित्त पित्त। यो चिनियाँ औषधीको एक अंश हो जुन डेटोक्सिकको सूत्रमा गँड्यौलाको अण्डाहरू नष्ट गर्न प्रयोग गरियो। उत्पादकहरू पनि विश्वास गर्छन् कि भालु पित्तको प्रतिरक्षा प्रणालीमा सहयोग गर्ने प्रभावहरू छन्।
कृत्रिम सहायक घटक। वनस्पति निकासी पौष्टिक छ र पातलो शरीर पुनर्स्थापित। डेटोक्सिकको कम्पोनेन्टहरूमा समावेश, यी सिंथेटिक-निर्मित पदार्थहरूले राम्रो स्वाद लिन्छन्।
खानाको साथ यस BAA का सबै माइक्रो कम्पोनेन्टहरूले लामो समयसम्म चल्ने प्रभावको साथ डेटोक्सिक हाइपोअलर्जेनिक बनाउँछ।
परजीवीहरूसँग लड्न डेटोक्सिकको लागि निर्देशनहरू
तपाईं प्याकेजिंग भित्र पूर्ण निर्माता निर्देशन (घर प्रयोग) पाउनुहुनेछ। तीन वर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरूको कुनै contraindication हुनेछ। यस एन्टि-परजीवी उपचारका उत्पादकहरूले यसको प्रयोग (घरमा, अवश्य पनि) निर्देशनहरूमा वर्णन गर्दछन्। खैर, तीन वर्ष र माथिका बच्चाहरूलाई डेटोक्सिक तयारीमा कुनै contraindication डर लाग्न सक्छ। डेटोक्सिक लिनका लागि नियमहरू:
बच्चाहरू तीन देखि छ वर्षको उमेर। दिनमा तीन पटक न्यूनतम खुराक। खाना खानु भन्दा पहिले 30 मिनेट लिनुहोस्। साना बच्चाहरुको लागि १० दिन भन्दा बढि डिटोक्सिक प्रयोग गर्नुहोस्।
बच्चाहरू उमेर छ देखि बाह्र। डेटोक्सिकका लागि निर्देशनहरू पालना गर्दै 20 दिनको लागि दिनमा दुई पटक लिनुहोस्। खाना खानु भन्दा पहिले 30 मिनेट लिनुहोस्।
वयस्क। लामो समयको लागि लिनुहोस् - 30 दिनहरू। एक दिन पहिले दुई पटक खाना।
यदि तपाइँ बान्ता, पखाला, टाउको दुखाइ, चकत्ते, वा रातो रूप को रूप मा लक्षणहरु को अनुभव, र यो बिग्रन्छ, तब एन्टी हेल्मिन्थ तयारी लिन रोक्नुहोस्। बीएए डिटोक्सिकले निन्द्रा, ऊर्जा गुमाउने र भोकको अभाव हुन सक्छ - यसको मतलब यो उपायले काम गरिरहेको छ।
प्रभाव तुरुन्तै कार्य गर्दछ - सिफारिस गरिएको खुराकको सम्मान गर्नुहोस्। यदि पहिलो पटक प्राय: केहि पनि ध्यान नदेखी समाप्त भएमा, त्यसपछि दोस्रो पटक पनि धेरैले ध्यान नदेखाईनेछ, तर यो त्यति नै प्रभावकारी हुनेछ। डेटोक्सिकको सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पछि तपाईंको शरीर सफा हुनेछ र तपाईंको अ organs्गहरूमा केही पोषण हुनेछ –ब्रेन, मुटु, फोक्सो, कलेजो र मृगौला। त्यसोभए तपाई पक्का महसुस गर्नुहुन्छ।
डेटोक्सिकका प्रयोगकर्ताहरूको समीक्षा
एलेक्स, 30 वर्ष पुरानो
मेरो पेट फुलेको थियो र मेरो मलमा समस्या थियो। म एक विशेषज्ञलाई हेर्न गएँ, यो भेटियो कि मलाई एक आक्रामक रोग (परजीवी) थियो। सम्भवतः मेरो कुकुरबाट। डिटोक्सिकले अप्रिय लक्षणहरूलाई कम गर्‍यो।
हेलेन, 35 वर्ष पुरानो
हामीसँग कुकुर, बच्चा र तोता छ। हामी प्रकृतिलाई माया गर्छौं। तर यसले परजीवी र दीर्घकालीन रोग ल्याउँछ। मैले वेबसाइटहरूमा समीक्षा पढें र डाक्टरहरूको कुरा सुने। मलाई डिटॉक्सिक (वनस्पति घटकहरू, बच्चाहरूले लिन सक्ने) विश्वास गर्थे, त्यसैले हामीले यसलाई पिउन थाल्यौं। दिन मा एक पटक मात्र - महान अहिले सम्म।
"डेटोक्सिक: परजीवी शुद्ध घर उपचार" मा 18 टिप्पणीहरू
अगस्ट 7, 2019 11 मा: 31 बजे
तपाईंले परजीवीहरू उन्मूलन गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले म तपाईंलाई प्रणालीमा गँड्यौलाहरू र परजीवीहरूलाई मार्न आहार र पूरकहरूको सम्बन्धमा के गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा केही व्यावहारिक सल्लाहहरू प्रदान गर्न चाहन्छु। परजीवीहरू हटाउन मद्दतको लागि 1 दृष्टिकोण पसिना ग्रंथिहरूको माध्यमबाट हो, त्यसैले केही व्यायाम गर्नुहोस् वा सौना छ। त्यसोभए वास्तवमै केहि क्षति गर्न सक्षम हुन, समग्र परजीवी सफा गर्नु राम्रो सहयोग हुनसक्दछ तर खानेकुराको विस्तृत सौंरा खान्नु पनि आवश्यक पर्दछ जुन परजीवीहरूलाई चिढचिढो पार्छ कि तपाईंले धेरै प्रकारका मानिसहरूलाई मार्नुभयो।
अगस्ट 7, 2019 11 मा: 34 बजे
तपाईंले केवल आफ्नो परजीवीहरूसँग डिल गर्न प्रयास गर्नुपर्नेछ यदि तपाईंको चिकित्सकद्वारा निर्देशित गरिएको घटनामा प्राकृतिक रूपमा। यद्यपि यो परजीवी बिभिन्न किसिमले फैलिन्छ, पानी (रमाईलोसँग सँगै पिउने) परजीवी फैलाउने सब भन्दा सामान्य साधन हो। अब, तपाईंको आफ्नै परजीवी शुद्ध कन्क्कोशन बनाउन, त्यहाँ परजीवीहरू मार्नको लागि विशेष पूरकहरू छन् र तपाईं टिन्चर फाराममा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
परजीवीहरूलाई हटाउनको लागि धेरै गाह्रो हुन सक्छ र भूभागलाई परिमार्जन गर्न महत्त्वपूर्ण छ ताकी तिनीहरूले माथिल्लो हात लिन सक्दैनन् र बिमारी र पोषक तत्वहरूको कमीमा नेतृत्व लिन सक्दछन्। यद्यपि सबैले परजीवीहरू लिन सक्छन्, कम प्रतिरक्षा, खराब आहार र अपर्याप्त स्वच्छता सबैले संक्रमणको सम्भावना बढाउन सक्छ। कुनै पनि प्रभावी परजीवी सफाले लसुन समावेश गर्नुपर्दछ र यसलाई लिनको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्।
अगस्ट 7, 2019 11 मा: 36 बजे
केहि औषधीहरु अरु भन्दा डाईरिया पनी बढी सम्भावना हुन्छ। औषधीहरूको वर्गीकरणले कानको भीडबाट राहत पनि दिन सक्छ। निर्धारित सबैभन्दा लोकप्रिय एन्टिपलेटलेट औषधि एस्पिरिन हो।
यदि तपाईं एन्टिबायोटिक तोकिदिनु भएको छ भने, निश्चित गर्नुहोस् धेरै दिन सम्म तालिकामा ल्याउन निश्चित हुनुहोस् जतिसक्दो तपाईंको डाक्टरले निर्देशन दिन्छ भने, जहाँ तपाईं धेरै राम्रो महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। धेरै मानिसहरूलाई गम्भीर साइड इफेक्टका कारण एन्टिबायोटिक्स लिन असम्भव लाग्छ। यदि उचित एन्टिबायोटिक निर्धारित गरिएको छ भने, संक्रमण राहत धेरै छिटो आउन सक्छ। आँखा वरपर वा अनुहारको अन्य तत्वहरूमा स्टेफ संक्रमणहरूको देखभाल गर्न इन्टरभेन्सस एन्टिबायोटिकहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
औषधि सुझाव गरिएको समयको लागि शरीरमा छोडिनुपर्दछ यो धुनु अघि। औषधीहरू जसलाई फ्ल्याश गर्न आवश्यक पर्दछ पानीको आपूर्तिलाई दूषित पार्ने सम्भावना हुँदैन, तर तिनीहरू अत्यन्त खतरनाक हुन्छन् जसको लागि उनीहरूले सिफारिस गरेको व्यक्ति बाहेक अरू कसैले निल्यो भने। समय बित्दै जाँदा धेरै औषधीहरू शरीरमा जारी हुन्छन्, र क्रस पिल्सले खतरनाक रूपमा ठूलो खुराक रिलिज गर्न सक्छ। एक खास औषधीबाट के अपेक्षा गर्ने भनेर तपाइँको डाक्टरसँग बोल्नुहोस्। बजारमा उपलब्ध अधिकांश कृत्रिम हर्मोन औषधिहरू T4 हुन्।
केहि औषधिहरू युवा पोस्टमेनोपल महिलाहरूका लागि केही बढी उपयुक्त हुन्छन् जबकि केहि वृद्ध महिलाहरूको लागि केही बढी उपयुक्त। अनावश्यक औषधिहरू उचित ढ disp्गले बेकार हुनुपर्दछ जस्तै घरका अन्य खतरनाक फोहोरहरूसँग। अस्टियोपोरोसिस औषधिहरू विभिन्न तरिकाले काम गर्दछन्। आदर्श अस्टियोपोरोसिस औषधि छान्दा ध्यानमा राख्नुपर्ने थुप्रै चीजहरू छन्।
सौन्दर्य समीक्षा भन्छन्:
अगस्ट 7, 2019 11 मा: 44 बजे
जहाँ हेल्मिन्थहरू विशिष्ट हुन्छन्, गँड्यौला गतिविधिहरू प्रति वर्ष दुई पटक गर्भवती महिलालाई गँड्यौला सहित जोखिममा पर्न सक्छ जो गर्भावस्थाको पहिलो तिमाही पछि गम्भीर मातृ एनीमिया कम गर्न, जन्म वजन बढाउन र शिशु मृत्युदर घटाउने जस्ता जोखिममा छ। माटो-संचारित हेल्मिन्थहरू उनीहरूको पोषण स्थिति बिगार्दछन् उनीहरूलाई विभिन्न तरीकाले संक्रमित गर्छन्। तिनीहरू बहु-सेल सेलहरू हुन् जुन तपाईंको शरीरको बाहिर वा बाहिर रहन सक्छन्। तिनीहरूले खुवाए पछि ती आन्द्राको विषाक्त पदार्थहरूमा बाहिर निस्कन्छन्। हेलमिन्थ शब्द ग्रीक हेलमिन्स, किराको एक प्रकारको हो।
गँड्यौलाहरूले छेउछाउको थाराउने गति सिर्जना गर्न अनुदैर्ध्य मांसपेशिको प्रयोग गर्दछ। समय बित्दै जाँदा कीराले खतरनाक साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। वयस्क गँड्यौलाहरू धेरै वर्षसम्म जीवित रहन्छन् र ठूलो मात्रामा अण्डा उत्पादन गर्दछ।
प्रोटोजोआन परजीवीहरूले बिभिन्न रोगहरूको विस्तृत चयनमा परिणाम दिन सक्छन्। पहिलो प्रकारका परजीवीहरू जो शरीरमा बस्दछन् प्रोटोजोआन परजीवीहरू भनेर चिनिन्छ। त्यहाँ चार प्रकारका प्रोटोजोना परजीवीहरू छन् जुन उनीहरू सर्ने मार्गको आधारमा वर्गीकृत गरिएका छन्।
अगस्ट 12, 20194मा: 28 बजे
सालुडोस, या टेंगो एल प्रोडक्टो, लेस डेजारे मिस कमन्टेरियो, ट्यान प्रलोस लॉस टर्मिनल ..
सेप्टेम्बर 8, 2019 12 मा: 05 बजे
बिहान, मँ आइटम अर्डर गर्ने प्रयास गर्दछु तर मँ तपाईंको टोल फ्री नम्बर पाउन सक्दिन?
डिलाला अगाब्रा भन्छन्:
सेप्टेम्बर 28, 20196मा: 25 हूँ
मसँग शेल फिश, गहुँ र ग्लुटनमा ठूलो एलर्जी प्रतिक्रिया छ ... के डिटोक्सिक उत्पाद ग्लुटन गहुँ र शेल फिश मेरो लागि सुरक्षित छ?
अक्टोबर 17, 20195मा: 54 बजे
मलाई लाग्छ कि यो राम्रो उत्पादन हो र मैले यसलाई मेरो लागि खरीद गर्नु पर्छ। म कहाँ किन्न सक्छु, वा कसलाई फोन गरेर कल गर्न सक्छु?
अक्टोबर 29, 2019 12 मा: 17 बजे
भालु पित्त…। तिमी भालुलाई मार्दैछौ
अक्टोबर 30, 20195मा: 21 बजे
बेनामी! होईन, तिनीहरूले कुनै भालू मार्दैनन्, केवल उनलाई समात्नुहोस्, द्रुत शल्यक्रिया गर्नुहोस्, भालु पित्त संकलन गर्नुहोस् र जान दिनुहोस्।
जर्ज ओ पोर्टा भन्छन्:
नोभेम्बर 19, 20195मा: 17 बजे
मलाई डिस्पारासिट भएको केहि आवश्यकताहरू भएको अनुभूति छ
डिसेम्बर 3, 20199मा: 01 बजे
किन्नुहोस् getridox मलाई कन्सर्ट गर्नुहोस्। म llega el lunes9de diciembre 2019 लोका que me llegue ya que estoy mucho estrelliliento
जनवरी 16, 2020 8 मा: 33 बजे
Honestamente yo lo empeze el domingo el producto pero no eh visto resultados q estara pasando xq yo; २० xl nlmas २० वटा क्युटोस नेस्टाइटा उना तोमर एक्सक्यू यो कन्स्ट ईस्टो नो वीओ रिजल्ट्स एक्सरेस्टी क्यू एल्गियान म्यू इयोड मे एक्सप्लिक सी एग एस्टार हेसिएन्डो माल्व यो फुई पोर्टिटेन डे पिपीलोमा माइनर टेन्गो माइकस वेरुगेसिट्स मस हेस्टा ईस्ट्रेइडिओ क्युस्पाइन।
जनवरी 17, 20202मा: 24 हूँ
बिएनो एएस ला सेगुन्डा वीजे क्यू एस्क्रिबो नो हे रेपुस्टा लो क्यू ईन्स्टै मिरान्डो क्यू ईन लॉस कमन्टेरियो डे रिजल्टोस छोरा पोसिटीबोस सी पेरो डेस्डे क्यू डेस्कुबरी ईस्टा पेजिना वा ईस्टा प्रोडक्टो ला फेचा वा लास होरास डी क्यू अबला सेगुन बिएन यस्को साक्षी बुनोस लोकानो होना एक ver y es la misma fecha y la misma hora osea q es esto solo lo ilusionan con estos प्रशंसापत्र प्यारेस क्यू ईएस ले लेस पगान नो हाबिया विस्टो एस्टो डेल कमेंटेरियो क्यू पेना क्यू एनजेन एएसआई अलास पर्सनस नोस इन्जीएएन ईएस जस्टो एक्सक बिएनो डी एंटिमो से टेनिया क्यू डेकोर से डायजो
जनवरी 17, 20203मा: 30 हूँ
यो लो एस्टॉय टोमन्डो वा टेन्गो मुचा फे एन डायओस क्यू ईस्ट प्रोडक्टो बा एसर एल एफफेटो
जनवरी 21, 20204मा: 14 बजे
मैले विगत २ हप्तादेखि डिटॉक्सिक लिइरहेको छु र वास्तवमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। मलाई अचम्म लाग्छ किन बोतलमा मात्र २० क्याप्सुलहरू छन्। यदि प्रशासनको अवधि days० दिन छ भने, प्रति दिन cap क्याप्सूल, त्यसपछि बोतलमा2० क्याप्सूल हुनुपर्दछ। २० क्याप्सूल केवल days दिनको लागि राम्रो छ। यस कम्पनीले हामीलाई कम्तिमा bott बोतलहरू किन्न सल्लाह दिईन्छ कुनै सकारात्मक नतीजा वा कुनै प्रकारको नतीजा हेर्नका लागि।
यो दु: खी छ किनकि मैले यो मेरो बहिनी र आमालाई सिफारिस गरें, जसलाई पनि खरीद गरिएको थियो। मलाई आशा छ कि यो अर्को स्क्यान होईन, नेटमा यति धेरै।
जनवरी 28, 20207मा: 40 बजे
Mi hijo tiene 8 aosos cuantas pastillas le doy al día y como se las de ve tomar